Ngwaọrụ 7 bara uru maka imeziwanye njikọ weebụsaịtị | Martech Zone
Ngwaọrụ 7 bara uru maka imeziwanye njikọ weebụsaịtị
Wednesday, April 17, 2019 Friday, April 23, 2021 Uchenna Onyekwere
N'ime afọ ole na ole gara aga, ịbawanye ojiji nke mgbasa ozi dijitalụ nke ndị ahịa agbanweela ụzọ ụlọ ọrụ si azụ ahịa ụdị ha. Ulo oru di iche iche nwere nkeji ole na ole iji jide uche onye obia ma chịkwaa ikike ịzụta ha. Site na ọtụtụ nhọrọ dịịrị ndị ahịa, nzukọ ọ bụla ga-achọta ngwakọta azụmaahịa pụrụ iche nke ga - eme ka ndị ahịa nwee iguzosi ike n'ihe nye akara ha.
Agbanyeghị, atụmatụ ndị a niile na-elekwasị anya ugbu a na iwulite ma melite njikọ weebụsaịtị. Anyị achịkọtara ụfọdụ ihe kpatara eji enyere ndị ahịa aka dị ka ihe dị mkpa karịa sọọsọ ịbụ ebumnuche njedebe nke usoro ahịa niile.
Dị ka otu isiokwu bipụtara Forbes, ihe karịrị 50% nke ndị ahịa nwere obi ụtọ ịkwụ ụgwọ ego maka nnukwu ụdị ahụmịhe
Ọ bụ ezie na isiokwu ọzọ bipụtara lifehack na-ekwu na ndị ahịa kwere nkwa ga-akwụ ihe ruru 25% karịa ndị na-ekwenyeghị
Otu isiokwu ahụ Lifehack kwukwara na ihe karịrị 65% nke ndị ahịa na-azụ ngwaahịa dabere na ọgwụgwọ ha na nkasi obi na saịtị ụfọdụ
Ọ bụ ezie na ọtụtụ saịtị na-ewu ewu, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ahịa anaghị enwe obi ụtọ na ọnụọgụ ozi ha natara na njedebe. Nke a bụ ngosipụta doro anya maka ụlọ ọrụ na ha kwesịrị ilekwasị anya karịa n'inye ozi ziri ezi na / ma ọ bụ ozi n'oge kwesịrị ekwesị iji nwee mmetụta dị mkpa. N'ịtụle na ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ dị elu na-enweta ihe karịrị 100,000 ọbịa kwa afọ na nkezi, ngalaba mgbasa ozi enweghị ike ileghara ọbụna otu onye ọbịa anya. Ọ dabara nke ọma, e nwere nnọọ ole na ole ngwaọrụ nke nwere ike inyere na enweta afọ ojuju ndị ahịa. Ka anyị lelee ha anya n'okpuru.
Ngwaọrụ bara uru 7 nke na-eme ka njikọ weebụsaịtị
1. Nchịkọta: Usoro ahia na-eji data iji mee mkpọsa mgbasa ozi ọhụụ iji melite njikọ ndị ahịa. N'ihi ngwá ọrụ nchịkọta, ụlọ ọrụ nwere ohere ịnweta ọtụtụ isi data. Enwere ike iji nsonaazụ ndị ahụ iji chepụta ma zipụ ozi ahaziri iche na ndị ahịa ha na ọtụtụ ọkwa aka.
Nchịkọta ekwentị dị ka ngwá ọrụ na-enwetakwa traction. Otu ihe kwesiri iburu n'uche bụ na ahịa, IT na ngalaba azụmaahịa ga-arụ ọrụ na egwu iji mepụta mkpọsa dị mma. Enwere ọtụtụ ọrụ ka na-aga n'ihu na mpaghara a ka ụlọ ọrụ na-eche nsogbu metụtara mmejuputa na ntinye mgbasa ozi.
2. Mkparịta ụka Live: Mkparịta ụka na-aga n'ihu na-aghọ otu n'ime usoro ndị ụlọ ọrụ na-eji eme ihe n'oge a. Iji mezue nke ahụ n'ụzọ ziri ezi na ozugbo, ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị ada mbà na echiche nke ngwanrọ nkata ndụ. Agbanyeghị, na ọtụtụ nhọrọ dị na ahịa, ọ naghị adị mfe idozi otu. Mana ọ bụrụ na ị nwere ngwa nkwado dịka ProProfs Nkata, inye nkwado ozugbo na-aghọ otu achicha.
Ihe ngwanrọ nkata dị ndụ na-enye ndị ọrụ gị aka ịghọta omume ndị ọbịa ma bido ịkparịta ụka na-enweghị isi na atụmatụ dịka Ekele Nkata. Ọ bụghị naanị na nke a na-akwalite uru nkwado ozugbo kamakwa ọ na-ewulite ahụmịhe nkwado ahaziri iche maka ndị ọbịa. Site na imirikiti atụmatụ na-arụkọ ọrụ ọnụ, azụmaahịa gị nwere ike hụ na ọnụnọ nke ndị ọbịa na-agbatị ma mezue zụọ dabere na aro ndị ọrụ gị.
3. Mobile Nkwado: Ngwa ngwa ngwa na-adịwanyewanye ka ọ dị mfe iji ma nye ndị ahịa ahụmịhe ịzụ ahịa ka mma. N'ezie, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-enye ndị na-eji ngwa ego ego dị egwu iji mee ka ha tinye na ụlọ ahịa ngwa ahụ, ọbụlagodi na ọ na-aga.
Dị ka ọwa nkwado ndị ahịa ọzọ, ụlọ ọrụ ndị na-etinye ego na nkwado ngwa ga-enwe ike ịnye ahụmịhe ịzụ ahịa yiri nke a. Gbaa mbọ hụ na onye ahịa gị nyere ikike ịnweta nhọrọ a, ka ị ghara ịba na agha iwu.
4. 24/7 Nkwado Ngwaọrụ: Enwere ọtụtụ ngwaọrụ mmadụ nwere ike iji bulie ahịa na ọtụtụ ọwa. Chọta ihe dị mma ma jiri ya nyere aka duzie ndị ahịa ọ bụ ezie na mkpebi mkpebi yana ịzụrụ. Enwere ike ịhazi ngwaọrụ ndị a na webụsaịtị nke ụlọ ọrụ iji bulie njikọ aka na oke elele.
5. Social Media nyiwe: Dị ka ịnwe weebụsaịtị bụ ihe dị mkpa, ọ dịkwa mkpa itinye aka na ndị ahịa gị site na ntanetị mgbasa ozi mmekọrịta. Ndị ahịa na-achọ ijikọ ụlọ ọrụ site na Instagram, Pinterest ma ọ bụ Facebook -chọgharị achọpụtala na ndị mmadụ na-azụta 40% ọzọ ma ọ bụrụ na ngosi na akara akụkọ nke ngwaahịa dị mma.
Buru n'uche na o zughi naanị ịnweta akaụntụ mana onye ga-enyocha ha dịkwa mkpa. Otu otu nwere ike inyere gị aka ịza ajụjụ ọ bụla onye ahịa nwere ike ịnwe ma na-aza okwu ma ọ bụ ajụjụ nwere ezigbo ozi. Site n’inye ndị ahịa gị ohere inweta ozi ọsọ ọsọ, ọ bụghị naanị na ị na-eme ka ohere ijide ha bawanye kamakwa ọ na-eme ka iguzosi ike n’ihe ha dịkwuo elu maka akara gị.
6. Callback Njirimara:Ulo oru na ndi ahia aghaghi ichota otutu ihe di mkpa ma achota azịza ha na ugbo elu. Enwere mmemme nke ụlọ ọrụ nwere ike iwunye ma jiri maka ndị nnọchi anya ọrụ iji jikwaa usoro oku. Ọ bụ ezie na ndị ahịa nwere ike na-echere oge ụfọdụ tupu azịza ajụjụ ha, eziokwu ahụ bụ na ha dị njikere ịnọrọ n'ahịrị na-egosi mmasị na njikọ aka ha na akara ahụ.
7. Enyemaka oche: Nke a bụ ikekwe otu n’ime ngwaọrụ kachasị mkpa azụmaahịa agaghị emebi ma ọlị. Iji sịnịma nbinye tiketi na-enye aka n’idozi nsogbu ma na-enye azịza ndị dị ezigbo mkpa. Tiketi bụ ụzọ dị mma iji soro esemokwu site na mmalite ruo na njedebe ma nye mkpebi.
Iji ngwaọrụ amụma maka usoro a nwere ike ịba uru dị ukwuu dị ka ịtụ anya nsogbu n'ọdịnihu bụ akụkụ nke usoro ahụ. Findchọta ụzọ iji dozie nsogbu na-adịkwa mfe. Ndị ahịa na-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na azụmaahịa na-eji mmemme dị otú a-ọ bụ nnukwu nkwalite akara ma dị mma maka afọ ojuju ndị ahịa.
Ihichapụ Ojiji nke 7 + Super Bara Uru Ngwaọrụ
Ekele maka ihe ọgbara ọhụrụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepe ngwaahịa ọhụrụ nke na-enye ndị ahịa ọyị enyi na enyi. Ndị nwere ike ịnọ n'ihu nke omume site na itinye ego na ngwaọrụ ndị kwesịrị ekwesị, nọrọ n'ihu usoro ahụ site na izute mkpa ndị ahịa na karịa ha.
E nwere ụlọ ọrụ na-enye ọrụ nke nwere ike ịnye ngwaọrụ ndị a niile ma mee ka ọ dị mfe maka azụmaahịa ilekwasị anya na ọrụ ha. Gini na iji ihe omuma a nwere iji bulie njikọta websaịtị gị, imepụta ihe yana afọ ojuju ndị ahịa - otu oge?
Tags: nkata ndụnkwado ekwentịnchịkọta weebụ
Jason bụ Sr. Teknụzụ Ọdee akwụkwọ jikọtara ugbu a ProProfs Nkata. Ọ na-enwe ọde ederede banyere ngwaahịa nkwado ndị ahịa, ọnọdụ na ụlọ ọrụ nkwado ndị ahịa yana mmetụta ego nke iji ụdị ngwaọrụ a. N'oge oge ya, Jason nwere mmasị ịga ọtụtụ njem iji mụta banyere ọdịbendị na ọdịnala ọhụrụ.
Mmebe nke Akwụkwọ Akụkọ Email
Ntughari: Nkwuputa Nkwado na Ntughari Ozi